M/weyne Shariif oo sheegay in dawladiisu in ay ka guulaysatay Islaamiyiinta ku kacsan. [Akhris …] – Radio Daljir
M/weyne Shariif oo sheegay in dawladiisu in ay ka guulaysatay Islaamiyiinta ku kacsan. [Akhris …]
Luulyo 27, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, July 27 – M/weynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ayaa ku dhawaaqay dawladdiisu in ay ka guulaysatay xooggaga mucaaradka ah ee ka soo horjeeda isla markaana maalinba maalinta ka danbaysa ay sii wiiqmayso awoodooda siyaasadeed.
M/weyne Shariif oo hadalkaan ka horjeediyey fadhi aan caadi ahayn oo ay iskugu yimaadeen xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa carabka ku dhajiyey dawladda KMG ah ee uu m/weynaha ka yahay in ay hab siyaaasadeed iyo mid awoodeedba kaga guulaysatay ururada islaamiyiinta ah ee ku kacsan, waxaana uu intaasi ku daray xilligaan in ay hoos si weyn ugu dhacday awooddii ururadaasi ee ay horay u lahaayeen.
Md, Shariif oo si gaar ah u soo qaaday dagaalladii ugu danbeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inta badan dawladdu in ay cagta marisay cududihii millatari ee ay kooxahaasi ku loolami jireen, haddana aysan jirin awood xooggan oo is hor taagi karta dawladdiisa.
Shiikh Shariif, oo sidoo kale ka warbxiyey safarradii ugu danbeeyey ee uu ku tagay dalka dibaddiisa ayaa faah-faahiyey waxyaabihii beesha caalamku u ballan qaadeen, wuxuuna sheegay dunidu dawladdiisa in ay la garab taagan tahay taakulo dhaqaale iyo mid ciidan haatanna la siiyey ballan qaado wax ku ool ah oo iskugu jira mid millatari iyo mid dhaqaale, iyadoo taa badalkeedana xooggaga ku kacsan loo aqoonsaday in ay yihiin kuwa diidan xalka umadda Soomaaliyeed waa sida uu m/weynuhu tilmaamaye.
M/weynuhu mar uu ka hadlayey soo dhamaytirkii ciidamadii AMISOM ee horay loo ballan qaaday, waxaa sheegay qorshahaasi hadda in uu yahay mid gacanta lagu isla markaan dhawaan la soo dhamaystiri doono ciidankii nabad ilaalinta ee Soomaliya loo ballan qaaday, waxaana uu intaasi sii raaciyey in ay jiraan wadamo hor leh oo Afrikan ah oo qorshaynayey Soomaaliya in ay ciidan u diraan.
Hadalk M/weynaha dawladda KMG ah ee Soomaaliya ee ku aaddan guusha dawladdiisu gaartay, ayaa ku soo beegmay xilli ay soo baxayaan mugdi soo kala dhax-gay ururada dawladda ku kacsan ee Al-shabaab iyo Xisbul islaam.
C/fitaax Cumar Geeddi,
Maaamulka Al-shabaab ee degmada Balcad oo xiray in ka badan 200 oo haween ah. [Akhris …]
Taliyaha ciidanka dawlada Somaliya oo ka warramay dagaal ka dhacay Beledweyn oo ay dawlada ka qabsatay Islaamiyiinta. [Dhegaysi …]